Mbabun​—Hom Mbɔ “Ndwuma Papa Ho Mbɔdzen”
Wɔ krataa a sunsum krɔnkrɔn kaa ɔsomafo Paul ma ɔkyerɛwee kɛmaa Titus no mu no, ɔkãa dɛ ɔsɛ dɛ mberantsɛ, a Titus noara so ka ho, yɛ “ndwuma pa” ho nhwɛdo wɔ “adze nyina mu.” (Tit 2:6, 7) Ekyir yi, ɔkãe wɔ dɛm tsir no ara mu dɛ Jehovah bɛtsew n’asomfo ho ma wɔaabɔ “ndwuma papa ho mbɔdzen.” (Tit 2:14) Dɛm ndwuma papa no mu kor nye dɛ yɛbɛkã Nyankopɔn n’Ahendzi no ho asɛm akyerɛ nkorɔfo na yaakyerɛkyerɛ hɔn. Sɛ eyɛ ɔbabun a, ana ibotum dze ahoɔdzen a ewɔ no asom dɛ ɔkwampaaefo boafo anaadɛ daa kwampaaefo?​—Mbɛ 20:29.
Sɛ epɛ dɛ esom dɛ ɔkwampaaefo a, yɛ wo mber nhyehyɛɛ yie na toto wo ndzɛmba yie ama eetum asom. (Lu 14:28-30) Dɛ nhwɛdo no, bisa woho dɛ: Sɛ mebɛyɛ ɔkwampaaefo a, ebɛnadze na mebɛyɛ dze etwitwa moho? Mebɛyɛ dɛn edu ndɔnhwer dodow a wɔhwehwɛ fi mo hɔ no ho? Kã ho asɛm kyerɛ Jehovah wɔ mpaabɔ mu. (Nd 37:5) Enye w’awofo nye akwampaaefo a wɔwɔ suahu no mbɔ ho nkɔmbɔ. Na afei tu anamɔn ahorow a ɔbɛma etum edu wo botae no ho. Nya awerɛhyɛmu dɛ Jehovah behyira mbɔdzen a erobɔ wɔ no som mu no do!
HWƐ VIDEO A WƆATO DZIN MBABUN A WƆREHYƐ JEHOVAH ENYIMNYAM NO, NA YIYI NSƐMBISA A ODZIDZI DO YI ANO:
Ebɛn nsɛndzendzen na binom edzi do ana worutum asom dɛ akwampaaefo, na wɔyɛɛ dɛn dzii dɛm nsɛndzendzen no do?
Awofo bɛyɛ dɛn aboa hɔn mba ma wɔaabɛyɛ akwampaaefo?
Ebɛnadze ntsi na no ho hia dɛ eyɛ nhyehyɛɛ a edze bɔkɔ asɛnka?
Ebɛnadze na asafo no mufo botum ayɛ dze ahyɛ akwampaaefo nkuran na wɔaboa hɔn?
Ebɛn nhyira na hɔn a wɔsom dɛ akwampaaefo no nya?
Mebɛyɛ dɛn etum asom dɛ ɔkwampaaefo?